Tenisy – «L’autre Noel»: homena sehatra ireo katitakely | NewsMada
Hikarakara fifaninanana, ho an’ny sokajy zandriny U6 ka hatramin’ny U14 lahy sy vavy, taranja tenisy, ny Club du Car Mandrosoa Ivato. Hotanterahina eny amin’ny kianjan’izy ireo izany fihaonana izany. Hizara roa ny fifanintsanana, hotanterahina ny asabotsy 8 sy ny alahady 9 desambra ho avy izao ny dingan’ny fifanintsanana rehetra ary ny asabotsy 15 sy ny alahady 16 desambra kosa ny dingana famaranana.
Araka ny fitsipika napetraky ny mpikarakara, natao seta roa ny lalao ka «5 jeux» ny an’ny sokajy U6 ka hatramin’ny U10 ary «6 jeux» kosa ny an’ireo ambiny. Raha toa ka sahala, miditra amin’ny «tie-break» ny mpifaninana. Hozaraina ao anaty sokajy ireo mpilalao mandray anjara ka hifanintsana ao anaty vondrona izy ireo.
Tanjon’ity fifaninanana ity ny hanomezana sehatra ireo katitakely amin’ny fanazarana azy ireo hilalao ny tenisy. Nahatsapa mantsy ireo mpikarakara fa tsy ampy fihaonana ireo ankizy, hany ka mihena ny fahavitrihany sy ny fahaizany nefa hita fa manana ny fahaiza-manao tokoa izy ireo.